Ken Segall meghere ohere nke Ilon Musk bụ onye isi ọdịnihu nke Apple | Esi m mac
Ken Segall meghere ohere nke Elon Musk ịbụ onye isi ọdịnihu nke Apple
Fewbọchị ole na ole gara aga, na N'ajụjụ ọnụ o nyere, Ken Segall, onye bụbu onye nduzi ihe okike nke Apple, zoro aka n'ajụjụ ọnụ ahụ Elon Musk, onye isi oche nke ugbu a Tesla Motors, n'etiti ndị ọzọ.
N'ezie, ọ tụrụ aro enwere ike ịbata njikọ n'etiti mba abụọ ahụ. Echiche a ga - eme ka ọganihu Apple Car nwere ihu ọma, ebe ọ bụ na azụmaahịa ahụ na naa dabere na ire nke ụgbọ ala okomoko. Ma ọ bụghị nke mbụ a na-eche echiche a.
Maka ndị na-amaghị ya, Elon Musk bụ otu n'ime ndị nwere nghọta na oge anyị. N'ezie, atụnyere ya n'ọtụtụ oge na Steve Jobs, ọ bụghị ihe ndabara. Ken Segall n'onwe ya kwuru, sị:
«Elon Musk bụ ma ga-abụ ihe ọhụrụ Steve Jobs. Enweghị m obi abụọ ọ bụla. "
Onye guzobere ụlọ ọrụ dị iche iche, malite na Zip2 na Paypal, na mgbe emesịrị, mgbe o keworị akụ na ụba ya, Hyperloop, SolarCity, SpaceX ma ọ bụ Tesla Motors, nke ọ ka na-eduzi taa. Iji nweta echiche, uba ya bu ihe ruru ijeri $ 11.000.
Echiche ya, ebe ọ bụ na ọ ghọrọ onye billionaire na-ere Paypal, bụ ịgbanwe okirikiri nke akụkọ ntolite dịka anyị si mara ya. A) Ee, Tesla Motors agbanweela ahịa ụgbọ ala, ma ọ dị nso ịnweta Autopilot (autopilot) na-arụ ọrụ zuru oke ma bido itinye ya na mba ụfọdụ; SpaceX ezube iwere otu ndị na-agụ kpakpando gaa Mars. Anyanwu Ọ gbanweela ahịa maka batrị na ojiji nke ike anyanwụ.
Dị ka anyị na-ahụ, onye ọhụụ ọhụụ 30 afọ mgbe nke ahụ gasịrị Steve bụ onye malitere ịmalite alaeze ya n'ọdịnihu n'ime ụgbọala. Ma, Kedu ihe Elon Musk nwere ike iwetara dị ka CEO na Apple?
Apple kwekọrọ na ihe ọhụrụ. Musk agbanweela ahịa ndị ahụ o metụrụ aka. N'ezie, converging na mbipụta nke ụgbọ ala eletrik, bụ ebe e mepụtarakwu amụma n'ihi ebumnuche Apple ịme Apple Apple nke aka ya.
Na mgbakwunye, ya na ya n'isi, na nkwuputa njikọta nke ụlọ ọrụ ya na ụlọ ọrụ Cupertino, anyị nwere ike ịtụ anya ka batrị batrị gbanwee site Anyanwu ma ọ bụ maka ụgbọala ndị ahụ na naa na flagship nke ụlọ ọrụ taa, iPhones.
Naanị ọdịnihu ga-agwa anyị ihe ga - eme na Apple yana etu echiche a ga - adị, nke, na - abawanye, na - ewepụtakwu ndị na - eso ụzọ na ndị na - ekwujọ ya. Ma gị, olee otu ị ga-esi hụ na n'ọdịnihu, Elon Musk bụ onye isi oche ọhụrụ nke ụlọ ọrụ Californian?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Ken Segall meghere ohere nke Elon Musk ịbụ onye isi ọdịnihu nke Apple
Ee, Apple na-efu ntakịrị ihe onyonyo ndị ntorobịa
Zaghachi Percy Salgado
Ọ ga-abụ ozi ọma dị ka anyị bụ ndị hụrụ ngwaahịa Apple n'anya na ugbu a Tesla. Anyị ga-achọ musk ka ọ bụrụ onye ndụmọdụ anyị. Ọ bụrụ na anyị ga-ahụ nhụsianya na ohere ịnwe n'aka anyị ngwaahịa nke June dị ka musk.
Zaghachi Jose bello
M grouper dijo
Elon Musk bụ ọgụgụ isi nke oge anyị na ezigbo ọchụnta ego, Steve Jobs bụ ezigbo ọchụnta ego. N’agbata ha abụọ ahụ enwere ọdịiche jọgburu onwe ya. Ọ ga-akara m mma ka Musk pụọ na ụlọ ọrụ dịka Apple, ọ gaghị egbusi oge ịme igwe, ọ bụ maka nnukwu ihe buru ibu.
Zaghachi Yo Mero
Phil Schiller na-ekwu na MacBook Pro na 32GB nke RAM chọrọ karịa batrị
Apple na-akwadebe ego maka Black Friday a